Ubi vaịn mbụ na West Africa "emere na Senegal" - Afrikhepri Fondation
Ubi vaịn mbụ na West Africa "Emere na Senegal"
SN’elu hectare ala dị na obere ụsọ mmiri, osisi vaịn nke “Clos des Baobabs” na-ama ifuru. Ihe ubi mbụ emere na Eprel gara aga. Ọnwa abụọ ka e mesịrị, ahịhịa 5000 a kụrụ rụpụtara ihe dị ka karama iri isii. "A rosé ahaziri ma nwee obi ụtọ ị toụ na-enweghị nsogbu dị ka aperitif", na-emesi obi ike na Franco-Senegalese oenologist Mokhsine Diouf, otu n'ime ndị mmekọ na azụmahịa. Ebumnuche nke owuwe ihe ubi ọzọ: karama 500, na-akọ lemonde.fr, nke nyere akụkọ na ikpe ahụ.
Iji batara na nke a, ọ dị mkpa iji mee ka ụdị ọdịdị dị otú a dị. O nwere ikuru mmiri 180 mita n'ime mmiri table, recreate dormancy (vegetative okirikiri nke vine) pụọ àkịkà na ndị ọzọ na pests, ibuso enwe itchy mkpụrụ vaịn. A ọtụtụ ọrụ na-adịghị ịda mba Mokhsine Diouf na ndị òtù ya François Normant, a na kọmputa rutere n'ebe Senegal na 2007, na Philippe Franchois, ihe insurer onye rụrụ ọrụ maka orú arọ na iri na Meursault tupu ya alọghachi na n'ala nna ya.
A na-eme atụmatụ ire ahịa mmanya Senegal na karama nde 20 ruo 25 kwa afọ. Dika ihe omumu nke Mokhsine Diouf mere, "anyi choputara 70% nke mmanya mediocre, karama na saịtị, 20% nke mmanya a na-ebubata na 10% nke mma, niche nke nwere ike itolite ma oburu na anyi muta".
Mana ịmara na na mba Alakụba kachasị, oriri mmanya ka bụ ọdịbendị emepebeghị emepe, onye na-akwalite "nso des Baobabs" bụ ebumnuche karịa, ogologo oge, n'ahịa mba ụwa. “A na-a Moreụkwu mmanya n’ụwa nile, mmanya vaịn na-adịkwa ole na ole. Mba ndị na-etolite etolite nwere kaadị eji egwu n'ọnọdụ ọhụrụ a, "ọ na-ekwu n'isiokwu nke lemonde.fr.
N'echiche a, mgbe obere ụsọ oké osimiri ahụ gasịrị, Mokhsine Diouf na-ezube idokwa n'ọdịnihu na mgbago ugwu nke Senegal. O kwuru, sị, “Ozugbo m nwetachara ahụmahụ, aghaghị m ịlaghachi n’ụwa. Achọrọ m ịkọ osisi vaịn na mpaghara Saint-Louis, nke nwere uru nke ịbụ onye na-ajụ oyi ntakịrị, ọ zara. Inweta oge gị bụ ihe nzuzo maka ihe ịga nke ọma. "
A mụrụ Saint-Louisian dị afọ 48 na Accra (Ghana). Nwa nke onye nnọchi anya gọọmentị, ọ hapụrụ Dakar mgbe ọ nwetara akara ugo mmụta iji mụọ mmekọrịta ọha na eze na Montpellier. Akụkọ mmanya ya malitere na 1990. "Mmanya bịara na mberede," na-echeta nwoke a na-akpọ "griot nke ndị na-a wineụ mmanya". Arụrụ m ọrụ, dịka nwa akwụkwọ, n'otu ụlọ ọrụ na-eme mkpọtụ. "
Site na ogo nke nna ya ukwu n'aka, ọ tụgharịrị na BTS na ahịa mmanya na mmụọ, ma n'otu oge ahụ soro usoro ọmụmụ na oenology na viticulture. “Site na diplọma m, etinyere m akwụkwọ maka ọnọdụ na-enweghị ohere n’ime ụlọ ọrụ dabara na profaịlụ m, mana azịza ya bụ‘ niet ’, ọ na-ekwu. N'ihi na m bụ novice, obi abụọ adịghị ya, na ma eleghị anya, m na-eme adịghị ezu mpaghara agba local M gbara arụkwaghịm. "
Kemgbe ahụ, ọ meela ụzọ nke aka ya, na-akparịta ụka maka ọkwa dị iche iche, rue mgbe e guzobere "Clos des Baobabs" maka mmanya kalama "emere na Senegal". Nke ga-ejupụta n'okpo ọnụ nke ndị na-eso ụzọ mpaghara na ikekwe emesịa ndị ahụ kachasị mara amara na mba ndị ọzọ.
Otu nwata kamite na-emepụta usoro ọgwụgwọ iji belata nsogbu ịrịa
Ihe ịma mma nke mmadụ - Eckhart Tollé (Audio)
A mụrụ Art na Africa
Site na 1641 gaa na 1652, ndị English na-ere 300 000 Ireland
Ki-NDOKI: Sayensị nsọ dị nsọ nke ọdịnala Kongo